Fadlan nagu caawi,waxad awoodo.
Project tigeena & wixii nagu cusub
Gacaliyeyaal daacada sharafta leh iyo deeq-bixiyeyaasha caawiya, Waxaan jeclaan lahayn inaan kaaga mahadcelinno, sidoo kale magaca Abschir, tabarucyada iyo deeqaha badan. Caawinaadaada la’aantiis, wali uma aanannaan […]
Carruurta iyo dhalinyarada: iskuxirka ugu liita ee bulshadayada
“Waxaad u baahan tahay caawimaaddeena” Waxaan dagaalanaa maalin walba. Kaliya maahan danahayaga iyo baahiyaheena, laakiin sidoo kale qof waliba wuxuu fursad u leeyahay inuu ku noolaado […]
Waxan caawinaynaa familada caruuraha jiran haysta ee Somaliya ku nool, kor u qaadida tayada caafimadka caruuraha jiran iyo dhisida Xarun caafimad, Kobcin, waxbarasho, subaxa hore iyo galabti lagu baro.
U kuurgalida Somalia
Somaliya waxay ku taal horn of Afrika, waxayna ka mid tahay Wadamada East Africa ah, waxana marta Badwaynta Indian ocean, Magaca Somaliya wuxu ka yimid Umada ku nool ee Somalida ah,Kadib marki ay laba Gobol oo ka mid ahaa shanta Gobol ee Somalida degto, labo ka xoroobeen Gumaystihii Talyaaniga iyo Ingiriiska Sanadkii 1960, kuna dhawaaqeen Jamhuriyadi Somaliya.
Bilawgii 1988 waxa marba marka ka danbaysa isa so tarayay dagaaladii Ehliga ahaa ee wadanka ka socday ilaa ay 1991 ka qarxeen Magalo Madaxdii Mogdisho,Dawladi Milatariga ahayd e 1969 awooda Milatari wadanka kagala wareegtay,Dawladi Shibilka ama Baarlamaniga ahayd e wadanka katalinay,Awoodeedi lagu wiiqay, wixi wakhtiga kadanbeeyay mudo ka badan 20 sano,Dawlad awood leh e xalada cakiran waxka ka qabata Somaliya mahelin.
Mudadas waxaa Somaliya so maray Maamulo midba mid ka danbeeyay, umaysan suuro galin mid koodna suurto galinta Hanaanki Maamul e Umadu u hamuun qabtay. Waxaase ka hirgalay Degamada qaarkood, Maamulo iyo Hanaan Dawladnimo, maamulka Somaliland halka u uga dhawaaqay ka madaxbanaanida dawladi Somaliya, iyo goni isutaag,Maamulka Puntland wuxu door biday raadinta Qaranimadii Somaliya iyo dhisida dawlad federaali ah oo ka hirgasha gayiga Somaliyeed, si awoodi wadanka u baahdo, o aysan markale gacanta ugu dhigin Maamul dhexe oo kaliya o wadanka ka hirgala. Sidoo kale wadanka waxaa ka bilawday Urur diimedyo,damac siyaadadeed o Wadanka khatar u keenay wata,sida Alshabaab,waxa kaloo Hirgalay Maamul Goboleedyo Dawlada Federaaliga ka mid ah, sida Puntland, Jubalnd, Koonfur Galbeed, Galmudug, Hirshabeele.
Gobolada Puntland waa Gobolo Taariikhi ah, kuna darsaday khayraad dabiici ah iyo dhaqan soo jireen ah o Allaah ku manaystay, Gumaytihii wadanka so maray ka hor waxa jiray Maamulo ku salaysan Saldanado, kuwaas oo ka kala talin jiray, Gobolka Bari magaalooyinka ku teedsan Xeebtaha sida, Bosaaso, Caluula,Raas casayr, Raas xaafuun, Iskushuban iyo Banderbayla, Magalooyinkas waxay ahaayeen wakhtigi ka horeeyay Gumaystaha iyo wakhtigi gumaystaha joogay qaarki, Magaalooyin xiriirkooda Ganacsi iyo dhaqaalahooda ama marka la fiirsho dhismayaasha qadimiga ah, aad u hor marsanaa, Gobolka Nugaal e dagaaladi Taarikhiga ahaa ku caan baxay, Magaaloyinka Eyl iyo Taleex.
Gobolka Mudug ee kuyaal Bartamaha Somaliya, Magalo Madaxda Galkacyo iyo Hobyo, waxa ka so jeeda ama ku dhashay, inta badan Geesiyaashi xoriyada Somaliya soo hoyiyay iyo Siyaasiyiinta Somaliya ugu Magac dheer.Saas o ay tahay, xornimadii ka dib Goboladan waxaa ku yimid Hoos u dhac weyn, xag dhaqaale,xag Bulsho iyo xag Maamulba.
Kadib marki awoodii Maamul, Bulsho iyo dhaqaalaba, xoogeedi u wareejiyeen,dhanka Gobolada Koonfureed, dawladihii dalka so maray, haba ugu awood badnaato, dawladi milatariga ahayd ee wadanka maamulaysay 20ka sano. Waagaas o loogu wanqalay magaca Gaariwaa. Dagaalkii Ehliga ahaa ee Somalia marku Magalo madaxdi Mogdisho naafeeyay, shacabki reer Mogdisho iyo goboladi koonfurtana,adkaatay sidii Nabad loogu so dabaali lahaa, waxay shacab badan dantu baday, in ay wadamada reer Galbeedka u haajiran, qaar kalana dawladaha dariska danmoodeen, shacab badan oo wadanka gudihiisa ku haray, waxay door bideen, in ay Goboladi Waqooyi Bari iyo Gobolada dhexe u laaban, Hanaa maamulna ka yagleeleyan, ka dibna raadiyaan Qaranki Somaliyeed ee Cisiga iyo Sharafta Mudnaa.